Xaalad adag iyo kalsooni darro ayaa ah sifooyinka siyaasadda 2017 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ulf Kristersson, oo bishii oktoobar kowdeedii 2017 loo doortay hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna. sawir: Janerik Henriksson/TT
Xaalad adag iyo kalsooni darro ayaa ah sifooyinka siyaasadda 2017
La daabacay torsdag 4 januari kl 08.29
Xaaladdii adkayd ee uu galay xisbiga Moderaterna oo ey daba socotay fadeexaddii it-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka - Transportstyrelsen oo ay daba socotay wasiirro iyo shaqaale sare ee ka howl-gala madaxtooyada oo jagooyinkii ey hayeen iska casiley ayaa la oran karaa iney yihiin xaaladihii ugu waaweynaa dhanka siyaasadda ee sannadka 2017.
Dhanka kale waxaa iyaduna la geli doonaa ololaha doorashada ee sannadka 2018 iyada oo xasuusta lagu hayo ku kala qeybsanaantii xisbiyada garabka midig ee su'aasha la xiriirta hoggaanka dalka iyo hoos u dhaca ballaaran ee dhanka taageerada shacabka ee la soo gudboonaaday xisbiga Miljöpartiet (MP).
Xawaaraha siyaasadda ee sannadka gabagabdiisa eynu ku suggan nahey 2017 ayaa bilowday horraantii sannadka, bishii jannaayo, kolkaasina oo hoggaamiyihii hore ee xisbiga Moderaterna Anna Kinberg Batra ay si lama filaan ah u shaacisay inay ku fekeri karto iney wada-hadal la bilowdo xisbiga, isla markaana uu garabka midig ee Alliansen soo ban-dhigi doono miisaaniyad ey ku mideey-san yihiin - middaasina oo loola jeedey in lagu rido xukuumadda si loola wareego awoodda dalka.
Tallaabo fikireedka uu soo ban-dhigey xisbiga M ayaa markiiba kala qeybsanaan ku keentay xisbiyadii garabka midig ee Alliansen iyo su'aasha la xiriirta habkii dalka loo hoggaamin lahaa. Xisbiga KD ayaa sacab ku taageeray fikirkaa, halka ey xisbiyada C iyo L suulka hoos ugu dhigeen. Tallaabo middaa la mid ah waxaa qaadey bulshada, iyadoona ay aad hoos ugu dhacday taageeradii loo hayay xisbiga M, tirakoobyo la sameeyey. Fikir halis badan u soo jiiday Kinberg Batra.
Eraygii furaha u ahaa 2017 - kalsooni darro
Erayga kalsooni darro ayaa noqday eraygii furaha u ahaa siyaasadda sannadka. Xisbiyada mucaaradka ayaa goor hore baarlamanka ka bilaabay iney kaga hadlaan kalsooni darro iney kala hor imaneyaan dawladda. Kow iney joojin doonaan qorshihii dawladda ee kor u qaadista canshuurta, iyadoona la oran karo in guul laga gaaray tallaabadaasi hanjabaadda vilket skulle visa sig effektivt. Waxaa soo raacday fadeexaddii it-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka - Transportstyrelsen. Karti darradii dawladda ee howlahaa ayaa horseeday iney xilalkoodii iska casilaan laba wasiir iyo xog-haye dawladeed. Is casilaaddii xog-hayaha dawladda ayaa iyaduna badbaadisay wasiirkii difaaca oo horay loogu hanjabey in kalsoonida lagala laaban doono inuu kursiga ku sii nagaado.
Inkasta oo ey socdeen handadaado badan ee dawladda kaga imananyey dhanka xisbiyada mucaaradka ee kalsooni kala noqosho ayey haddana dawladda iyo qaar ka mid ah mucaaradu gaareen heshiisyo muhiim ah ee loo dhan yahay intii sannadka lagu guda jirey. Falkii argagixisada ee ka dhacay waddada Drottninggatan 7-dii bishii abriil 2017 ayaa sababay in si degdeg ah loo bilaabo wada-hadallo u dhexeeyey dawladda iyo garabka mucaaradka sidii loo adkeeyn lahaa xeerarka ciqaabta ee falalka argagixisada, halkaasina oo horraantii kuleeylihii laga wada gaarey heshiisyo loo dhan yahey.
Dhanka howlaha difaaca ayey heshiis loo dhan yahey ku wada gaareen dawladda iyo xisbiyada garabka midig ee M, C iyo KD miisaaniyad dheeri ah oo la geliyo. Xoojinta iyo adkeeynta xeerarka ayaa ahaa fikirro inta badan la hadal hayey, halkaasina oo ey xisbiyadu ku tartamayeen cidda ugu adadag. Waxaa la adkeeyey xeerarka iyo qorshooyin kale oo la soo ban-dhigey.
Bishii agoosto ee 2017 ayay caqabaddii xisbiga Moderaterna uu gaarey heerkii ugu sareeyey, iyadoona aakhirkii ay hoggaamiyihii xisbiga Anna Kinberg Batra (M) ay ka rajo dhigtay inay hoggaanka xisbiga sii waddo. Laba bilood dabadeed waxaa krsigii ay banneeysay ee xisbiga si kalsooni leh loogu wareejiyey Ulf Kristersson. Isla markiiba waxaa yimid is-bedel. Waxaa markiiba kor u kacday taageeradii xisbiga, isagoona uu xisbigu ka soo kacay taageeradii saddexaad ee shacabka, gaarayna kaalinta labaad, halka uu dhanka kale xisbiga SD uu lumiyay taageero ballaaran kolka la eego tira koobyadii la sameeyey. Xisbiga Center-ka ayaa aad kor ugu kacay muddadii uu xisbiga Moderaterna uu ku jiray hoos u dhaca, inkastoo uu iminka kor u kicii Center-ku uu istaagay iminka.
Xeerarka cusub ee da'da howl-gabka
Muddo oo ey isku jiidjiidaneyeen xisbiyada S iyo MP ee ku bahoobey xukuumadda ayey heshiis ka wada gaareen xaaladdii dhallin-yarada keli-nimada dalka ku timaadda iyaga oo aanu la socon waalidkii dhalay. Heshiiskaasi oo oranaya in la siiyo suurtagal labaad ee xeer deggenaansho. Hase yeeshee aanay muuqan siduu ku hirgeli lahaa. Saddex ka mid ah xisbiyada garabka midig ee Alliansen ayaa diidmo kala hor yimid qorshahaa. Xisbiga Center-ku waa inuu ha ugu codeeyaa si qorshahani loo meel mariyo, inkastuu aanu weli caddeeyn mowqifkiisu.
Ololihii sida buuxda loo hadal hayey ee socday bilihii dambe ee sannadka ee loogu magac darey metoo ayaan garab marin siyaasadda. Qayb u gaar ahayd siyaasiyiinta oo loogu magac darey marrinnada awoodaha - #imaktenskorridorer, ayey qaar badani kaga hadleen caqabadaha silacyada iyo fara xumeeynta haweenka loo geeysto. Wasiirka arrimmaha dibadda Sweden Margot Wallström waxay ka markhaati kacday iney falalkaasi ku kacaan madax sare oo ay qudheeda la soo gudboonaatay.
Af-hayeenka baarlamanka Sweden ayaan Urban Ahlin ayaan sidoo kale ka nabad gelin ololaha, middaasina oo ku kalliftay hoggaamiyaha xil-dhibaannada xisbiga Socialdemokraterna Anders Ygeman inuu soo jeediyo in baaritaan la furo. Sidoo kale dood lagu qabtay baarlamanka ayay wasiiradda sinnaanta Åsa Regnér kub allan qaaday xeer cusub oo uu ka mid yahay tusaale ahaan caddeeyn in isu galmoodka lagu yahay heshiis iyo in ciqaabta la adkeeyo.